सप्तकोसीमा जेटवोटको सफल परीक्षण - Arunkhabar.com
प्रकाशित : ११ चैत्र २०७४, आईतवार १८:०२
विराटनगर, ११ चैत । Brand Viagra online, cheap zithromax. सुनसरीको बराह नगरपालिका १ र उदयपुरको बेलाका नगरपालिका ८ को सीमानामा रहेको सप्तकोसी नदीबाट संचालनको तयारी गरिएको जेटवोट (मिनी पानी जहाज) को आज सफल परीक्षण गरिएको छ ।
प्राविधिक सहितको टोलीले सफल परीक्षण गरेसंगै जल पर्यटनको प्रचुर सम्भावना रहेको सप्तकोसी नदीमा जेटवोट संचालन गर्न बाटो खुलेको छ । तीन करोड रुपैयाँको लागतमा बराह क्षेत्र जलयातायात तथा पर्यटन सेवा प्रालीले सुनसरीको चतरालाई आधार बनाएर वोट संचालनको तयारी गरेको हो । पर्यटन व्यवसायीहरु सन्तोश भण्डारी, पर्शुराम राई (कवि), अमित साह र हरिकुमार श्रेष्ठ सहितको टोलीले जेटवोट संचालन गर्न लाग्नु भएको हो ।
यसमा मिलन साह, विमलमान श्रेष्ठ, ओमप्रसाद रेग्मी र लक्ष्मीप्रसाद रेग्मी शेयर सदस्य हुनु हुन्छ । बराह क्षेत्र जलयातायात तथा पर्यटन सेवा प्रालीका अध्यक्ष सन्तोश भण्डारीका अनुसार स्थानीय स्तरमा जल पर्यटनको विकासका लागि वोट संचालन गर्न चार वर्षदेखि आवश्यक अध्ययनको काम भइरहेको थियो । भण्डारीका अनुसार वोट संचालनका लागि दुई वर्ष अघि अनुमति लिइसकिएको छ ।
उहाँले अवको एक दुई दिन भित्रैमा वोट पूर्ण रुपमा संचालनमा ल्याइने पनि बताउनु भयो । पहिलो चरणमा चतरादेखि भोजपुर, धनकुटा र उदयपुरको संगमस्थल सिम्ले सम्म १४ किलोमिटर दूरीमा वोट संचालनको तयारी गरिएको जानकारी भण्डारीले दिनु भयो । उहाँका अनुसार वोटले १४ किलोमिटर दूरी १५ मिनेटमै पार गर्छ ।
१४ किलोमिटर दूरीमा एक जनाको चार सय रुपैयाँ भाडा लिने तयारी संचालकले गरेका छन् । साढे तीन मेट्रिक्टन क्षमताको वोटमा एक पटकमा ३० जनाले यात्रा गर्न सक्ने छन् ।dapoxetine
प्रदेश नं. १ बाट ४६ जनाको नमूना संकलन
विराटनगर, ५ पुस । प्रदेश १ मा पछिल्लो २४ घण्टामा ११ जनामा कोरोना संक्रमण भएको...
मोरङ काँग्रेस सभापतिका उम्मेदवारले ५१ प्रतिशत मत ल्याएनन्, पुन : मतदान हुने
विराटनगर, १३ मंसिर । नेपाली काँग्रेस मोरङको सभापति पदको पुन : निर्वाचन हुने भएको छ...